बिदेशमा नेपालीलाई यस्तो सास्तीः स्वदेश फर्किने लिष्टमा नाम छ, साथमा टिकट छैन!! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > बिदेशमा नेपालीलाई यस्तो सास्तीः स्वदेश फर्किने लिष्टमा नाम छ, साथमा टिकट छैन!!
admin September 17, 2020 प्रवास	0
दोहा— खाडी मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले कोरोना भाइरस महामारी लगायत अन्य कारणले समस्यामा परेर स्वदेश पठाउन नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका उडान तालिका सार्वजनिक गरे पनि यहाँ स्थित नेपालीहरूले टिकट पाउनै सकस भएको गुनासो गरेका छन् । झण्डै सात महिनादेखि रोजगारी गुमाएर साउदी अरबबाट स्वदेश फर्किने दिनको पर्खाइमा रहेका अर्घाखाँचीका विशाल कार्कीकाे यस्तो बहाल छ ।
विशाल कार्कीले भने, ‘बल्ल बल्ल दूतावासले सार्वजनिक गरेको लिस्टमा नाम त आयो तर के गर्नु टिकट नै पाइँदैन ।’ टिकट खरिदका लागि ट्राभल एजेन्सीमा पटक पटक बिहानदेखि लाइनमा बसे पनि बेलुका रित्तोहात फर्किनु परेको उनले बताए । आफू बिरामी पनि रहेको उनको भनाइ छ । साउदी अरबबाट स्वदेश फर्किन टिकटको खोजीमा भौँतारिएका खोटाङका धनकुमार राईका अनुसार हवाई टिकटको उचित व्यवस्थापन नहुँदा हजारौँ नेपालीहरू निराश बनेका छन् ।
स्वदेश फर्किन लागेका अधिकांश नेपालीहरू हवाई टिकटका लागि चर्को घाममा लाइन बस्न बाध्य छन् । दूतावासहरूले टिकटका लागि सम्बन्धित एयरलाइन्सको ट्राभल्स एजेन्सीसँग सम्पर्क गर्ने भने पनि उचित व्यवस्थापन नभएको धनकुमारको भनाइ छ । कतारमा रहेका नेपालीहरूले पनि टिकट नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
दूतावासले स्वदेश फर्किनै पर्ने भनेर सार्वजनिक गरेको नामावलीमा नाम परेको भए पनि टिकट नपाएको उनीहरूको भनाइ छ । स्वदेश फर्किन तयार रहेका नेपालीहरूलाई टिकटको व्यवस्था गर्न समस्या भएको छ । कतै टिकट पाइहाले पनि नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी लिने गरेका छन् ।
यति बेला स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली श्रमिकहरू धेरै भएको तर उडान संख्या कम भएकोले पनि टिकट पाउन सकस भएको दूतावासका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । खाडीमा कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीलाई घर फर्किन सहजीकरणका लागि नेपाल सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।-समाचारका भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***